Maamulka Gobolka Banaadir oo bilaabay howlgalo lagu fujinayo boorarka Ganacsi ee Afka Qalaad - iftineducation.com
Maamulka Gobolka Banaadir oo bilaabay howlgalo lagu fujinayo boorarka Ganacsi ee Afka Qalaad
iftineducation.com – Maamulka Gobolka Banaadir ayaa saaka ka bilaabay magaalada Muqdisho howlgal lagu fujinayo boorarka goobaha Ganacsiga ee ku qoran luuqadaha qalaad, iyadoo howl galkan lagu tilmaamay ujeedkiisa mid loogu hiilinayo Afka Hooyo.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane oo saaka la hadlayay warbaahinta maxaliga ayaa sheegay inay dhamaatay waqtigii uu Guddoomiyaha Gobolka Banaadir u qabtay in dhamaan boorarka ku qoran afafka qalaad looga fujiyo goobaha Ganacsiga.
“Maanta ayay tahay maalintii u dambeysay ee Guddoomiyaha Gobolka Banaadir u qabtay in boorarka Ganacsiga ee ku qoran afafka Qalaad laga fujiyo, ujeedka ma ahan la dagaalanka luqadaha Ajnabiga ee waa in luqada Soomaaliga oo far waa weyn lagu qoray ka muuqato qeybta kore, halka qeybta hoose lagu qoray luqadaha kale”ayuu yiri Afhayeenka Gobolka Banaadir C/fataax Xalane.
Afhayeen Xalane ayaa sheegay in howl galka maanta uu ka dhacayo wadada dheer ee Maka Al-Mukarama, halkaasoo ay ku yaallaan goobo ganacsi oo aa du fara badan, isagoo xusay in howlgalkan ay ka qeyb qaadanayaan ciidamo gaar ah, isla markaana cidii aan fulin amarkii Guddoomiyaha la ganaaxi doono.
Goobaha Ganacsiga ee ku yaalla wadooyinka ayaa boorarka ay ku xayeysiistaan Ganacsigooda ku qora Luqada Ingiriiska
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa dhowaan sheegay in aan lagu arki karin goobaha Ganacsiga boorar ku qoran afka qalaad, isagoo xusay inay muhiim tahay in afka Soomaaliga uu ugu horeeyo boorka, inta ka dambeysana luqadaha kale lagu qoro.
Inta badan goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa boorarka ay ku xayeysiistaan goobahooda ganacsi ku qora afafka Qalaad, sida Luqada Ingiriiska, taasoo lagu tilmaamay mid aan horumarineyn afka Hooyo ee Soomaaliga.